‘भ्रमण वर्ष २०२०’ व्यापार विस्तार गर्ने सुनौलो अवसर डा. पूर्ण कँडेल क्यानेडियनहरुको भ्रमणको औषत बजेट प्रतिव्यक्ति ४ हजार डलर हुन्छ
काठमाडौं । २० लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्यसहित सरकारले हिजो(जनवरी १)देखि औपचारिक रुपमा नेपाल भ्रमण वर्षको शुरुवात गरेको छ । यसै सन्दर्भमा युरोप—अमेरिकामा नेपाल भ्रमण वर्षको तयारी, नेपाल र क्यानडा विचको व्यापार र त्यसका विविध पक्षहरु लगायतको विषयमा केन्द्रित रही जनतापाटी डटकमका कार्यकारी सम्पादक बाबुराम ढकालले क्यानडा नेपाल विजनेश नेटवर्कका अध्यक्ष डा. पूर्ण कँडेलसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ, केहीवर्षदेखि क्यानडाको टोरेण्टोमा व्यवसाय गरिरहेका चितवन शारदानगरका कँडेलसँगको कुराकानीको सारसंक्षेप :
नेपालमा हिजो नेपाल भ्रमण वर्ष उद्घाटन भएको छ, तपाईहरुले चांही विदेशमा के के गर्नुभयो ?
यस्ता कार्यक्रमहरुको महत्व नेपालमै रहेका नेपालीहरुको लागि भन्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई बढी हुन्छ । क्यानडा लगायतका विदेशी राष्ट्रहरुमा जनवरी ७ तारिखका दिन नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने नेपाल सरकारको कार्यक्रम छ । तर, हामीले हिजैदेखि यहाँ कार्यक्रम शुरु गरिसकेका छौं ।
उद्घाटन नहुँदै कार्यक्रम शुरु गर्नु भयो ?
हो, उद्घाटन भनेको औपचारिकता हो । तर, सरकारी अभियान त १ तारिखदेखि नै शुरु भयो । त्यसैले हिजो अन्टारियो प्रोभिन्सको स्मल विजनेश मिनिस्टर परमजित सरकारियाको प्रमुख आतिथ्यतामा नेपाल भ्रमण वर्ष र टोपी दिवसको कार्यक्रम गर्यौं । साँझ टोरेण्टोमा र्याली गर्यौं ।
उद्घाटनको दिन ७ तारिखमा राजदूतावासले आयोजना गरेको अरु विभिन्न कार्यक्रमको साथमा टोरेण्टो टावरमा २ वटा हेलिकोप्टरले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र नेपाल भ्रमण वर्षको लोगो प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । नेपालीहरुका विभिन्न समुदायले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । समग्रमा भन्दा नेपाल भ्रमण वर्षले क्यानडाका मात्र होइन, विदेशमा बसेका हरेक नेपालीलाई उत्साहित गरेको छ, नेपालप्रति चासो राख्नेहरुलाई पनि उत्साहित गरिरहेको छ ।
क्यानडामा रहेका नेपालीहरुको संख्या कति छ र तिमध्ये कतिले यो वर्ष नेपाल भ्रमण गर्लान् ?
औपचारिक तथ्याङ्क त छैन । तर, करिब ८० हजारदेखि १ लाख नेपाली क्यानाडामा वसोवास गरिरहेको अनुमान गरिएको छ । यो वर्ष ती सबै नेपालीहरु एक पटक नेपाल पुग्छन् भन्ने अनुमान हामीले गरेका छौं ।
भ्रमण वर्षको लक्ष्य त विदेशमा रहेका नेपालीहरु भन्दा पनि विदेशी नागरिकलाई नेपाल भ्रमण गराउनु हो, कति क्यानेडियनहरु नेपाल भ्रमण गर्लान् ?
गत वर्ष २० हजार क्यानेडियनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । यो वर्ष सकेसम्म त्यसको तेब्बर नभए पनि दोब्बर क्यानेडियनलाई नेपाल पठाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ । क्यानडा सरकारको स्तरबाट पनि मन्त्री सहितका भ्रमण टोलीहरु नेपाल जाने टुंगो भएको छ । त्यसले पनि नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।
नेपाल आउँदा क्यानेडियनहरुले कति खर्च गर्छन् ?
क्यानेडियनहरुको एक पटकको भ्रमणको औषत बजेट प्रतिव्यक्ति ४ हजार डलर हुन्छ । क्यानडा र नेपाल बीचको हवाई दूरी निकै लामो छ र करिब १ हजार डलर त हवाई भाडामै खर्च हुन्छ । त्यसैले औसतमा एकजना क्यानेडियनले नेपालमा ३ हजार डलर खर्च गर्छ ।
तपाईँ टोरेण्टोमा व्यापार गरिरहनु भएको छ, नेपाल र क्यानडाको व्यापारको अवस्था कस्तो छ ?
निकै असमान छ । नेपालबाट क्यानडामा वार्षिक करिब ४५ मिलियन डलरको समान निर्यात हुने गरेको छ भने नेपालले त्यसको करिब ९ गुना बढी ४ सय मिलियन डलरको समान आयात गर्छ । नेपालबाट कृषिउपज वस्तुहरुको निर्यात हुने गरेको छ भने क्यानडाबाट धेरैजसो औषधि र वायोमेडिकल उपकरण तथा हवाई सम्बन्धि समानहरुको निर्यात हुने गरेको छ । अहिलेसम्म पनि नेपाल र क्यानडाबीच ठूलो व्यापार असमानता छ र यो असमानता हटाई व्यापार घाटा कम गर्न नेपाल सरकारले नै विशेष कार्यक्रम सहित पहल गर्नुपर्छ ।
कस्तो पहल ?
नेपालबाट क्यानडामा चिया, गार्मेण्ट लगायतका समानहरु निर्यात हुन्छ । र, सम्भावना पनि कृषि उत्पादनकै हो । नेपालले कृषि उत्पादन वाहेक अरु समान निर्यातको सम्भावना त्यति धेरै देखिदैन । त्यसैले गुणस्तरिय कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, प्याकेजिङ र बजारीकरण गर्नु पर्छ । अरुदेशमा भन्दा पनि क्यानडामा नेपाली समानको बजारीकरण गर्न सजिलो छ । किनकी क्यानडा सरकारले नेपालबाट आउने केही समानहरु बाहेक ९९ प्रतिशत समानहरुमा भन्सार छुटको सुविधा दिएको छ ।
नेपालले त्यो छुटको उपयोगको लागि रणनीति बनाएर काम गर्ने हो भने क्यानडामा निकै ठूलो मात्रामा नेपाली उत्पादनको बजार देखिएको छ । त्यो बजार विस्तारको लागि पनि नेपाल भ्रमण वर्षको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले केवल पर्यटक भित्र्याउने मात्र नभई नेपाली उत्पादनको प्रचार प्रसार गर्ने सुनौलो मौकाको रुपमा नेपाल भ्रमण वर्षलाई उपयोग गर्नु पर्छ ।
कालोपत्र गरेको दुई महिनामै भत्कियो सडक ९ मिनेट पहिले
गण्डकी सरकारलाई पूर्वअर्थमन्त्रीको प्रश्न- झण्डा हल्लाउन मात्रै सरकारमा जानुभएको हो ? २० मिनेट पहिले
जिसस र आर्सनलबीच पाँच वर्षको सम्झौता ३३ मिनेट पहिले